Ọbọgwụ nri ọnya - Goodao Technology Co., Ltd.
Emebere Duck Snack Cube maka ọzụzụ nkịta yana iji melite agụụ. Dabere na ụgwọ ọrụ cube anụ iji mee ka mmekọrịta ọzụzụ dị nro. Ọdịnaya dị obere nwere ike ime ka ọ gbarie nri ma rie nri nke ọma. Ọ gbanyela n'ime obere cube iji zere ọnọdụ karịrị akarị na ilo ihe egwu. Anyị na -ahọrọ anụ ara ọbọgwụ dị elu dị ka akụrụngwa, gafee mmiri mmiri na -adịghị ala ala yana usoro akọrọ ikuku iji dowe ụtọ na nri.
Ọnụ nri (cube/ụbọchị)
Ntị: Gbanwee ọnụ nri dị ka afọ nkịta si dị, nha ahụ ya na ọkwa ọrụ ya.
Protein Crube: 28%min
Aha ngwaahịa Ọkụ Duck Cube
Anyị na-etinyekwa uche n'ịkwalite nchịkwa ihe na mmemme QC iji hụ na anyị nwere ike nweta uru dị egwu site na ụlọ ọrụ asọmpi siri ike maka ire ọkụ China Factory Direct Supply Pillow Type Food Meat Floss Duck Neck Packaging Machine, Anyị ga-ejigide ime na -agbasi mbọ ike ma ka anyị na -anwa ike anyị niile ị nweta ihe kachasị dị elu, ọnụahịa asọmpi na ụlọ ọrụ pụrụ iche nye onye ahịa ọ bụla. Mmezu gị, ebube anyị !!!
Ngwongwo na-ere ọkụ China Nnukwu Pillow Packing Machine, Igwe ngwongwo ohiri isi kwụ ọtọ, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọnụọgụ ahịa azụmaahịa mba ofesi, nke bụ Alibaba, Globalsources, Market Global, Made-in-china. Ngwaahịa akara "XinGuangYang" na -ere nke ọma na Europe, America, Middle East na mpaghara ndị ọzọ karịa mba 30.
Igodo nke ihe ịga nke ọma anyị bụ “Ezi ngwaahịa dị mma, ọnụ ahịa ezi uche yana ezigbo ọrụ” maka ụlọ ọrụ ọkachamara maka China Duck Sandwich Azụ Sanwichi Pet Na -emeso nri maka ọgwụgwọ na -akwụghachi ụgwọ nwamba, anyị na -agbaso ụkpụrụ gị nke “Ọrụ nhazi, iji mejuo ọchịchọ ndị ahịa. ”.
Ụlọ ọrụ ọkachamara maka China Pet Snacks na Fish price, Taa, anyị nwere ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile, gụnyere USA, Russia, Spain, Italy, Singapore, Malaysia, Thailand, Poland, Iran na Iraq. Ebumnuche nke ụlọ ọrụ anyị bụ ịnye ngwaahịa kacha mma na ọnụahịa kacha mma. Anyị na -atụ anya iso gị azụ ahịa.
Nke gara aga: Ọbọgwụ kechie rawhide stick
Osote: Mkpanaka anụ ezi